Kulanka adag ee Liverpool, xaallada De Gea, soo laabashada qaar ka mid ah xiddigihii ka dhawaacnaa & dhowr arrimood uu ka hadlay Tababare Solskjær – Gool FM
(Manchester) 18 Okt 2019.Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu aaminsan yahay in dhigiisa Jurgen Klopp uu soo maray isla xaalada uu haatan ku sugan yahay oo kale xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Liverpool.
Haddalka tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu imaanayaa kahor shir jaraa’id uu ka soo muuqday kulanka la wada sugayo ee dhex mari doono kooxaha Manchester United iyo Liverpool.
“Uma maleynayo in David de Gea uu ciyaari doono Axada, laakiin xaaladiisa uma xama sidii loo qabay, kaddib markii aan arkay wixii dhacay kulankii Spain waxaan moodayay inuu garoomada ka maqnaan doono ilaa dhamaadka qeybta hore xilli ciyaareedka, laakiin dhaawaca ma ahan mid xoogan”.
Dhinaca kale tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa u sheegay war aad u fiican taageerayaasha kooxda Manchester United kaasoo ah soo laabashada xiddigaha Aaron Wan-Bissaka iyo Anthony Martial wuxuuna yiri:
“Waxaan rabaa inaan inaan idin sheego war aad u fiican, waxaan rajeyneynaa in maalinta Axada aan aragno ciyaartoy cusub ee kusoo laaban doono tababarka, kulanka Liverpool waxaan ku arki doonaa waxyaabo badan, kulankan waa fursad ay ciyaartoyda kooxda ku sameyn karaan taariikh”.
“Markaad lumiso inta ugu badan ciyaartoydaada dhanka weerarka, waxaad la halgami doontaa inaad abuurto fursadaha aad rabto, kulankii Newcastle kubad heysashadeena waxay aheyd 75%, laakiin fursadihii aan sameynay ma aanan ka faa’ideysanin”.
“Waxaan xasuustaa imaatinka Jürgen Klopp ee kooxda Liverpool, haddii aan isbar-bardhig ku sameeyo xaaladeena iyo wixii ku dhacay xilligaas, Reds waxay la kulantay dhaawacyo badan waxayna la soo kulmeen dhibaato aad u weyn”.
“Ciyaartoyda waxay rabaan inay wax uun sameeyaan sida aan ku arko tababarka, waxaan dareemayaa inay leeyihiin awood maskaxeed mararka qaar”.